Ayaa la qaadi karo Playstation noqon kartaa Console ciyaarta gacanta lagu qabto ee ay Sony. Horumarinta Console lagu dhawaaqay oo dhan 2003 oo gabi ahaanba ahaa undraped on xooggiisii ​​kow iyo toban, 2004, ka dood group Sony ka hor 2004. Nidaamka saaray ee Japan on Dec 2004 ee North America on March 2005. Waxa ugu horrayn kula tartamayay DS Nintendo ah , qayb ka mid ah jiilka toddobaad oo kulan video. Ayaa la qaadi karo Playstation ahaa qaybtii nidaamka awood badan mar bilaabay si fudud mar DS Nintendo ee 2004. Waxaa gabi ahaanba ahaa Real hoose saldanad gacanta lagu Nintendo ee, meel kasta oo dhowr tartanka, sida SNK ee casriga ah Geo jeebka iyo Nokia ee N-Gage, guuldareystay. Its GPU koobay naqshadeynta-dhamaadka sare on a gacanta lagu qabto, halka four.3 ay. Arkaysid screen oo multi-warbaahinta awoodaha, sida ciyaaryahan video iyo telefishinka ay tuner, Abuuray PlayStation qaadi karo qalab madadaalada mobile halis ah waqtiga. Waxaa intaasi dheer fursado hanti la Playstation saddex, PSPs kala duwan oo sidaas daraaddeed internetka. Waa Console kaliya ee gacanta lagu qabto in la isticmaalo qaab AN indhaha disk, Universal Media cajalid (UMD), sida ay dhexdhexaad ah xog-kaydinta hoose.
Tilmaamaha gaarka u ah:
Processor: processor PSP (System inta jeer saacad 1 ~ 333MHz)
Xasuusta Main: 32MB
DRAM laka: 4MB
Display: 4.3 inch, 16: 9 widescreen LCD midableh, 480 x 272 pixel (16.77 million midabo), Max. 200 CD / m2 (la gacanta dhalaalka)
Guddoomiyaha dhisay-in rikoor ku hadla
Main Input / Output: 802.11b IEEE (Wi-Fi), USB 2.0 (Target), Memory ul ™ Duo PRO, IrDA, IR Remote (SIRCS)
Disc Drive: UMD Drive (Radidiyaha oo kaliya)
SABABTA PSP HORUMARINTA EMULATOR:
Maanta waxaan hayaa wax badan oo qalab horumarsan Console badan PSP aan ku raaxaysan karaan, dadka qaarkood ayaa weli jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro PSP horumariyo kulan ee nidaamka, si horumarinta la shaqeeyay tan sano oo isku dayaya in ay ku daydaan nidaamyada PSP gal ah qalab cusub oo horumarsan.
Oo ay taageerayaan nidaamyada hawlgalka IYO aragti awood ay PSP:
Emulators Nintendo ah loo horumariyo socda nidaamyada hawlgalka:
Khayaadka oo ka shaqeeya by dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyadda ah ee processor iyo qaybaha shaqsi. Waxaad dhiso gabal kasta oo gaar ah oo ku saabsan nidaamka ka dibna xirmaan xubnihii badan sida fiilooyin sameeyo hardware.
TOP 5 PSP EMULATORS:
1. PPSSPP EMULATOR:
PPSSPP waa mashruuc il furan, shati two.0 GPL hooseba. Qof kasta waa lagu soo dhawaynayaa inay ka qayb qaataan uqaadineed xeerka qayb ahaan sabab u ah tabarruca sida, PPSSPP ee waafaqsan yahay joogto ah sii kordhaysa. PPSSPP ordi doonaa kulan PSP on your computer xal buuxda u HD aad, iyo iyaga oo aad u ciyaaro robot. Waxaa doono qaabab xitaa sare in waxoogaa laga yaabaa in aad u bleary sida ay u abuurmeen daaha yar oo ugu horeeya PSP ah.
Features iyo functionalities:
Play in qaraarkii HD oo dheeraad ah
Play loox u weyn-screen ciyaaraha mobile
Habee on-screen gacanta ku taabto ama isticmaal xukuma dibadda ama keyboard
Save iyo soo celinta gobolka ciyaarta meel kasta, waqti kasta
Kumbyuutarradeedu ilaa shaandhaynta anisotropic iyo gargaarka bani-texture
Waddaa inta badan kulan PSP.
Emulator aad u deggan oo leh qaab ciyaareed aan fiicnayn.
Hab screen Full Xoojiyey gacanta ku configurable
Ku dhawaad ​​ma jiro,
2. PCSP emulator:
PCSP waa emulator kale PSP ku qoran C ++ luqadda. PCSP sidoo kale hoos horumarinta iyo waa uu sii fiicnaanayaa xiriirkaas oo ka fiican ka dib markii la sii daayo kasta oo hadda ay taageerto kulan badan oo ganacsi PCSP fulisaa ah "limiter vsync" cusub oo sahasha in la yareeyo FPS ay u 60. version ugu dambaysay ee PCSP taageertaa cusub badbaadin nidaamka oo la sheegay inay ahaan la jaan qaada kulan badan, waxaana sidoo kale Uhurru Kenyaata iyadoo keyboard sing ah, wada-hadal farriin iyo taageero dhawaaqa hordhac ah.
Tayada sare ee dega Khayaadka oo sanqadha
Save ciyaari gobolada
Limiter Vsync karti.
User saaxiibtinimo gui
Waddaa inta badan kulamada ganacsiga
Emulator Fast filaayo in qaab.
Muuqaalada waafaqsan Sare.
Tiro yar cayayaanka yar yar oo ay weli ka yar horumarinta.
3. JPCSP EMULATOR:
Emulator JPCSP waa emulator Java ah ee la qaadan karo PlayStation xaasidnimo (PSP) .PSP weli waa mid cusub oo la emulators yar oo ka ciyaari kara wax ka badan dhowr kulan, si kastaba ha ahaatee kooxda JPCSP ayaa si fiican u bilowday. Waxay dhawaan UNI- version Java ee emulator in ay C ++ si ay awood ugu waa in dadka la hardware PC yar awoodaan in ay isticmaalaan nidaamka xawaare hufan. Ama in ay tahay rajada. Dib u eegista waxaa loogu talagalay version Java ah, laakiin waxaa la dhiiri si aad u aragto horumar dheeraad ah si loo hagaajiyo wax-qabadka emulator ah. Waxaad samayn kartaa tijaabo ah ama aad u gaar ah PSP kulan 'homebrew' ama goodhiyaha haddaba markuu emulator JPCSP si ay u horumariyaan on qalab horumarinta waxtar ah. JPCSP waa emulator yar oo bulshada curdinka ah si kastaba ha ahaatee waxaa sii kordhaya iyo horumarinta sii.
Khayaadka oo Xasilloon taageertaa kulan badan.
Emulator Fast qaab filaayo
Nidaamyada hawlgalka Multiple taageeray
Ku jira cayayaanka u baahan in la xalliyo
Shilalka mararka qaarkood.
4. Potemkin Emulator:
Potemkin sidoo kale waa il furan emulator tijaabo ah waxaa la abuuray oo sii daayay Ector hoos liisanka GPL ah. Code ayaa isha kuwa danaynaya in ay isku dayaan oo dhammeeyo mashruuc. Haddii mashruucan yimaado kuwo mira dhal buuxa, Sony dhab ahaan wax badan oo dheeraad ah oo ah in la walwalo yeelan doonaan. Goobta burcad badeeda ayaa yaabo qarxi kari lahaa la sii daayo shaqaynaysa ee sida emulator ah.
Ciyaaraa xujo Bobble jeebka JAP
Ku Bilowday AI Go
Waddaa goodhiyaha badan oo ka SDK PSP ah
Casilaan ISOs iyo Ururada (DAX lahayn)
Tusaha casilaan Windows.
Ordi laga yaabaa in kulan homebrew PSP.
Taageeri karaa badan PSP SDK ee
Shilalka mararka qaar badan oo kutaan wali horumarinta.
5. SOYWIZ EMULATOR:
The SOYWIZ S ugu dambeeyay waxaa ka mid ah garaafka iyo xawaaraha horumar badan iyo sidoo kale editor buuxda oo CWCheat iyo taabasho. Emulator Tani waxaa loo qoondeeyey in daaqadaha iyo dhufto ee Linux.
A CWCheat foomka editor.
Codso HQ2X in qaabab
View iyo edit qaabab la editor cusub ka sameysan (u abuuraa file .texmap ah oo lala xiriiriyay galka eedeysanuhu si loo shubi doonaa mar kasta oo) oo aad u astaysto ama hagaajin qaabab.
Added SMAA shaashad buuxda antialiasing.
Hagaajinta sasCore sidaas kulan la isticmaalayo waxa ay haatan ka fiican saari notes
Xawaaraha haya'ad soo hagaagaya. Hadda kulan 3D waa mid fudud.
Khiyaameeyaan taageero karti.
Top 5 Emulators Boy Virtual u isagana
Nintendo 64 EULATORS
15 Shabakadaha Awesome ka damcin, Like Emulator Jannada
Top 10 Wii Emulators - Play Nitendo Wii Games on Qalabka kale
> Resource > Emulator > PSP emulators - Sidee u ciyaaro kulan PSP telefoonka mobile